Mpanamboatra sy mpamatsy kalitaoda PET Soda ambongadiny | Copak
Kitapo soda PET, azo anarana ho toy ny kapoaka PET, kapoaka pop-top PET sns. Ny PET Can dia fitambarana tsy manam-paharoa an'ny PET Jar miaraka amin'ny fonosana metaly mora misokatra, vita amin'ny akora PET izy ireo ary tena mety amin'ny fonosana ho an'ny zava-pisotro toy ny zava-pisotro, voankazo, voasarimakirana, ronono, tealy, kafe mangatsiaka, ronono ary ny sisa. Endri-javatra sasany an'ny COPAK'sKitapo soda PET toy ny etsy ambany,
Kitapo soda PET, azo anarana ho toy ny kapoaka PET, kapoaka pop-top PET sns. PET Can dia fitambarana tsy manam-paharoa an'ny PET Jar miaraka amin'ny fonosana metaly mora manokatra.Izy ireo dia vita amin'ny akora PET ary mety amin'ny fonosana fisotroana toy ny zava-pisotro, voankazo, voasarimakirana, ronono, tealy, kafe mangatsiaka, ronono ary ny sisa. Endri-javatra sasany an'ny COPAK’s Kitapo soda PET toy ny etsy ambany
- Fitaovana: plastika PET avo kalitao, azo averina averina 100%.
Fiarovana amin'ny sakafo: manomboka amin'ny loharanom-pahalalana ka hatramin'ny famokarana sy ny fandefasana. Ny dingana rehetra dia vita amin'ny fenitry ny sakafo.
Maharitra sy mateza maharitra: ny kapoaka soda PET dia tonga lafatra amin'ny fanalana ny sakafonao. Natao ho an'ny fihazonana tànana sy famehezana izy ireo. Tsy mila miahiahy momba ny famoahana na ny triatra ianao.
- Satrony: Mampiasà fitaovana Aluminium, fantsom-pokontany. Mora misokatra sy madio.
-Tsiro ny fahitana tsara, ny mpanjifa dia afaka mahita ny atiny mivantana, mampiseho ny naoty sy ny sandan'ny vokatrao
Sakana tsara avy amin'ny Oxygen, Carbon dioxide Moisture.
Orinasa orinasa COPAK Shanghai dia mpanamboatra matihanina amin'ny fonosana PET isan-karazany. Kaopy PET, tavoahangy PET ary kapoaka soda no tena vokarinay.Kitapo soda PET miovaova ny endrika, ny habe, ny habe ary ny fanontana. Azonao atao ny milaza ny antsipirihanao takiana, ho eo am-pelatananao ireo fonosana PET tianao.
Ny volany dia manomboka amin'ny 6oz ka hatramin'ny 24oz. 12OZKitapo soda PET ary kapoaka soda 16 OZ PET no be mpitia indrindra.
Namboarina: 4C pirinty fanaovana pirinty na plastika mihena fonosana sarimihetsika na UV-efijery fanontana amin'ny tavoahangy dia tohanan'ny fanontana logo.
Ny sarony sy ny tavoahangy dia mamehezana ny masinina famehezana. Mora misokatra ny sarom-bilany amin'ny fisintomana ny peratra pop-top.
Milina fanamafisam-peo semi-mandeha ho azy na 100% azo amidy. Manana fifandraisana tsara amin'ny orinasa milina famehezana izahay ary afaka mahazo vidiny mifaninana ho anao. Afaka alefanao ny masinina famehezana sy nyKitapo soda PET miaraka amin'ny fitoeran-javatra iray.
Teo aloha: Afaka pop-top PET
Manaraka: Soda plastika
Tavoahangy PET misy sakafo
Kitapo soda manokana
Tavoahangy plastika mazava
Tavoahangy plastika Eco Friendly